2021 WARBIXIN SANNADKA SANADKAN XNUMX QORAALKA CAD - Isbahaysiga Xuquuqda Soogalootiga Colorado
Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado > Maxaa kucusub CIRC > 2021 Warbixinta Sannadlaha ah ee qoraalka CAD
WARBIXINTA SHARCI-DEJINTA CIRC 2021
WARQAD KA SOO BAXDAY XUQUUQDA SIYAASADDA SANAD BUUXA EE XUQUUQDA SOOMAALI
Kalfadhiga sharci-dejinta ee sanadkan waxa uu ahaa mid taallo u ah xuquuqda soogalootiga ee gobolkeena. Sannadka 2020 waxa aanu la kulannay saamaynta xun ee COVID-19 ee bulshooyinkayada, caafimaadkayaga, iyo fayoobida marka lagu daro mid ka mid ah fadhiyada ugu adag ee gobolka. Imaanshaha kalfadhiga sharci-dejinta ee 2021, waxa aanu wajahnay hubanti la'aan aad u weyn - miisaaniyad dhimis aad u badan, dhaqaale aan degganayn, iyo isbeddel sharciyeed waqtiga. Wali isbahaysigeena horay ayaa loo sii riixay oo gacan ka geystay qorista taariikhda Colorado.
Waxaan ogeyn in xilligan uu u yeeray wax badan. Saamaynta kala duwan ee COVID-19, Dhaqdhaqaaqa Nolosha Madow, iyo dib u cusboonaysiinta xisaabinta jinsiyadeed ee qaranka ayaa abuuray fursado lagu beddelo daaqadda siyaasadeed ee suurtagalka ah. Xubnuhu waxa ay awoodeen in ay xidhiidho is-goysyada ah u sameeyaan sharci-dejiyeyaasha oo ay sharaxaan sida kala duwanaanshiyaha jinsiyaddu u sii jiro ku dhawaad ​​siyaasad kasta iyo qaab dhismeed kasta - oo ay tusiyaan sida COVID uu uga sii daray sinnaan la'aantan muddada dheer jirtay. Waxay ahayd sanad adag sababo badan dartood, haddana xubnuhu waxay sii wadeen inay soo baxaan oo ay u dhaqaajiyaan sharci-dejiyeyaasha si ay ugu istaagaan bulshadeena. Waad ku mahadsan tahay xoogga iyo adkaysiga xubnaheenna, waxaan ku gaadhnay taageerada laba geesoodka ah ee ololahayaga xog-ururinta ee labada aqal waxaanan u dhaqaajinay sharci-dejiyeyaasha Dimuqraadiga si ay kor ugu qaadaan Sanduuqa Difaaca Sharciga oo ah mudnaanta koowaad! Waxaan sidoo kale aragnay awoodda sii kordheysa ee horyaalla sharci-dejinta ee ciyaarta. Sannadkan xubnaha kutlada Black iyo Latino waxay soo galeen door muhiim ah hoggaanka iyo guddiyada muhiimka ah - iyaga oo gacan ka geysanaya kor u qaadista arrimahayaga iyo isu-ururinta asxaabtooda si ay u taageeraan. Sannadkan waxa uu ahaa markii sharci-dajiyayaashu ay u adeegsadeen awooddooda siyaasadeed si ay u sameeyaan isbeddelka isbeddelka ee wakhtigan taariikhiga ah u yeedhay.
Markii ugu horeysay, waxaan aragnay xirmo weyn oo biilasha soogalootiga ah oo galaya Capitol AND PASS (ka sii akhri faahfaahin dheeraad ah)! CIRC waxa ay awooday in ay hogaamiso oo ay si guul leh uga gudubto 2-da ah ee mudnaantayada ugu saraysa - Xogta Gaarka ah iyo Abuuritaanka Sanduuqa Difaaca Sharci ee Gobolka oo dhan! Waxaan sidoo kale ku hanweynahay inaan iskaashi la samaynay isbahaysiga cajiibka ah ee shaqaalaha beeraha (Ujeedka Cadaalada, Mashruuca Ilaalinta Nidaamka Cuntada, Mashruuca Isbaanishka, iyo qaar kale oo badan) si aan taariikh u samayno gudbinta Xeerka Xuquuqda Shaqaalaha Beeraha si loo kordhiyo ilaalinta aasaasiga ah iyo kuwa muhiimka ah ee shaqada. shaqaalaha beeralayda kuwaas oo la soo saaray muddo aad u dheer. Biilashani waa bilow. Tani waxay marag u tahay xubnaheenna iyo hogaamiyayaasha xuquuqda soogalootiga kuwaas oo ku riyooday oo ka shaqeeyay inay dhisaan Colorado ka wanaagsan. Waqtigan xaadirka ah, waxaan sharaf iyo mahadcelineynaa kuwa hagayay dowlad-goboleedkayada iyo siyaasadda laga soo bilaabo 2006 sharciga "Ii tus waraaqahaaga" ilaa heer cusub, halkaas oo aan awood u leenahay inaan joojinno biilasha ka hortagga soogalootiga ee jidkooda. Colorado waxay ku socotaa isbeddel siyaasadeed oo isbeddel ah, waxaanan ku faraxsanahay inaan u jeedsano jihada Colorado oo soo dhaweynaysa dhammaan. – KOOXDA SIYAASADDA CIRC
OLOLAHA MUHIIMKA AH EE CIRC
Sanduuqa Difaaca SHARCI
Aad baanu ugu faraxsanahay inaan la wadaagno in HB21-1194 uu ansixiyay sharci-dejinta oo uu u socdo miiska Guddoomiyaha si uu u saxiixo! Ka dib 2 sano oo ka shaqeynta ololahan tan iyo markii loo doortay mudnaanta sare ee golaha 2019 CIRC, waxaan nimid hal talaabo oo muhiim ah oo ku dhow dhismaha matalaada caalamiga ah ee maxkamada socdaalka Colorado. Waxaan rabnaa inaan u mahadcelinno xubnaha bulshada ee nala wadaagay sheekooyinka ay wajahayaan maxkamadaha socdaalka ee cadaalad-darrada ah, xubnahayada CIRC-da ee sida hagar la'aanta ah uga shaqeeyay guddigayaga hoggaaminta, iyo horyaallayada sharci-dejinta ee isu badelay taageerada iyo istiraatijiyadda in sharcigan laga gudbo heerka ugu dambeeya. Tani ma suurta gasheen la'aantaa. HB21-1194 waxa ay dhistaa Sanduuqa Difaaca Sharciga Socdaalka ee gobolka oo dhan - ka dhigaya Colorado gobolka ugu horreeya si loo abuuro fund iyada oo loo marayo sharciga. Sanduuqa difaaca sharciga ah wuxuu abuuri doonaa barnaamij deeq loogu qalmo, bixiyeyaasha adeegga sharciga aan faa'iido doonka ahayn si ay u sameeyaan matalaad sharci-pro-bono shaqsiyaadka dacwadaha ka saarista, iyadoo diiradda la saarayo matalaadda la hayo. Dhammaan kiisaska la qaaday waxaa loo dammaanad qaadayaa matalaadda sharci ilaa inta kiiska la soo gabagabeynayo; ilaa macmiilku joojiyo buuxinta shuruudaha u-qalmitaanka ama macmiilku aanu sii degenayn gobolka. Sharcigayagu waxa kale oo uu caddeeyey sharciga si uu awood u siiyo oo loogu dhiirigeliyo dawladaha hoose si ay u sameystaan ​​lacag difaac sharci oo iyaga u gaar ah ama wax ku biiriyaan sanduuqa gobolka oo dhan. Tani waa muhiim maadaama CIRC iyo xubnaheenu ay hadda hayaan dadaallo dhowr ah oo maxalli ah oo lagu ballaarinayo dhaqaalaha difaaca sharciga ee gobolka oo dhan. Sanduuqa gobolka oo dhan, $100,000 ayaa si joogto ah looga goyn doonaa sanduuqa guud ee gobolka ee barnaamijka waxaanan ka filaynaa maalgelinta abuurka Vera National Institute of Justice. Sanduuqa waxa lagu xarayn doonaa Waaxda Shaqada iyo Shaqaalaynta ee hoos timaada Xafiiska New Americans kuwaas oo maamuli doona deeqda. In kasta oo ay tani tahay tallaabo weyn oo hore loo qaaday ololaha matalaadda caalamiga ah ee Colorado, waxaan ognahay in ay jirto shaqo ka horeysa sidii loo kobcin lahaa sanduuqa si aan si buuxda u daboolo baahida gobolkeena. Tani waa bilowga dhismaha taageerada gobolka iyo deegaanka oo dhan ee qoysaska iyo shakhsiyaadka lagu qasbay inay wajahaan nidaamka maxkamada socdaalka oo keliya.
Waa maxay HB21-1194:
Wuxuu abuuraa sanduuq fasaxaya tabarucaad guud iyo mid gaar ahaaneed oo u qoondeeya maalgelinta iyada oo loo marayo barnaamijka deeqda tartanka ee hay'adaha aan faa'iido doonka ahayn ee gobolka oo dhan kuwaas oo bixiya matalaada dacwadaha ka saarista socdaalka.
U abuuraa qaabka difaaca dadweynaha ee matalaadda caalamiga ah ee kuwa buuxiya hab-raacyada dakhliga iyo iyadoon loo eegayn suuraggalnimada guusha ee kiis gaar ah.
Waxay ku siisaa matalo sharci oo bilaash ah Coladans oo wajahaya dacwadaha masaafurinta ee maxkamada socdaalka waxayna ka hooseeyaan 200% Tilmaamaha Faqriga Federaalka, maadaama agab la heli karo.
Isbahaysigayada iyo dhaqdhaqaaqayagu waxa ay aad uga fogaadeen kalfadhigii gaarka ahaa ee 2006 ee lagu ansixiyay SB90 - sharciga "i tusi waraaqahaaga" kaas oo u baahan sharci fulinta in ay dadka u sheegaan ICE oo keentay kumanaan xadhig iyo masaafurin. Tan iyo markaas waanu tirtirnay SB90, mamnuucday maxaabiista ICE iyo xidhitaanka ICE ee guryaha maxkamadaha, waxaana aanu u abuurnay barnaamijka shatiga SB251 bulshadeena si ay u helaan liisanka darawalnimada. Markaan sii wadno inaan si guul leh u xaddidno fulinta ICE ee gobolkeena, waxay noqdeen kuwa si isa soo taraya ugu tiirsan ilaalinta iyo wadaaga xogta si aan ula socono oo aan u xidhno xubnaha bulshadayada.
Taasi waa sababta aan aad ugu hanweynahay in aan la wadaagno in SB21-131 ay soo mareen labada gole ee taageerada laba geesoodka ah oo u socda miiska Guddoomiyaha si loo saxiixo sharciga!! SB131 waxay ka joojisaa wakaaladaha sida ICE inay ka helaan xogtayada khaaska ah wakaaladaha dawlada, sida DMV, ee fulinta socdaalka. Ma aanan sameyn karin tan la'aanteed taageerada Isbaheysiga IDrive oo abaabulay marag-fur xoog leh oo la yimid iyagoo wata cadeymo buuxa oo ka yimid xubnaha bulshada oo hoosta ka xariiqay saameynta xog wadaagga. Waxaan sidoo kale rabnaa inaan u mahadcelino shuraakadayada ururka ee ku hawlanaa shirar aan tiro lahayn oo lala yeeshay xafiiska Guddoomiyaha iyo daneeyayaasha kale si ay u diyaariyaan mid ka mid ah biilasha xogta gaarka ah ee ugu xooggan qaranka: FWD.us, Meyer Law Office, iyo ACLU. Ugu dambayn, laakiin hubaal maaha ugu yaraan, horyaallayada sharci-dejinta Senator Julie Gonzales iyo Wakiil Serena GonzalesGutierrez waxay ahaayeen qalab si loo meel mariyo sharciga oo naga caawiyay inaan cadaadis saarno DMV iyo Waaxda Dakhliga inta lagu jiro habkan inta aan ka shaqeynay wax ka beddelka iyo qoraallada maaliyadeed. Si wada jir ah ayaan ula xisaabtannay iyaga oo aan isticmaalnay awooddayada wadajirka ah si aan ugu riixno iyaga si ay u qaataan luqadda biilka ee ugu xooggan iyo ilaalinta suurtagalka ah.
Ololahani waxa uu ahaa safar iyo wakhti dheer oo soo socday. Kadib markii aan maqalnay walaaca beesha ee ah in DMV ay la wadaagtay macluumaadka shatiga SB251 ICE, kooxdayadu waxay soo gudbisay codsi diiwaanka dadweynaha si ay u arkaan macluumaadka ay DMV la wadaagayso. Wixii aanu daaha ka fayday ayaa naga naxay oo sii xoojiyay cabsidii aanu ka maqalnay madaxda bulshada ee gobolka oo dhan. Iimayllada u dhexeeya qaybta baadhista khiyaanada DMV iyo ICE ayaa daaha ka qaaday dhaqanka baahsan ee wadaaga macluumaadka kaas oo ku hanjabay inuu wiiqi doono barnaamijka SB251 iyo, ka sii muhiimsan, kalsoonida bulshada ee dawlad goboleedkayaga. Baaritaanka diiwaanka furan ayaa ahaa cadeynta aan u baahanahay si aan u cadeyno in shaqaalaha gobolka ay ku xad gudbeen kalsoonida xubnaha bulshada annaga oo la wadaagaya macluumaadka ICE. Sharci-dejiyeyaasha ayaa la yaabay luqadda badheedhka ah ee bini'aadantinimada ee loo adeegsaday iimayladan waxayna keentay xulafo aan macquul ahayn miiska, oo ay ku jiraan sharci-dajiyayaal badan oo Jamhuuri ah oo arkay xidhiidho ay la leeyihiin dagaalkooda si ay u dhistaan ​​ilaalin xog adag. SB21-131 waxay u abuuri doontaa tilmaamo dhammaan wakaaladaha gobolka si ay u ilaaliyaan macluumaadka shakhsiyeed (PII) ee uu hayo gobolka. Sharcigu waxa uu mamnuucayaa in macluumaadka shakhsiyeed lala wadaago ICE ama cid saddexaad iyada oo aan la helin amar maxkamadeed, waaran ama amar. Intaa waxaa dheer, ICE ama qolo saddexaad si ay u galaan xogta, waa inay caddeeyaan si sannadle ah laga bilaabo Janaayo 2022 inaysan isticmaali doonin ama bixin doonin macluumaadka iyagoo la kaashanaya wakaaladaha socdaalka ee federaalka. Laga bilaabo 2022, gobolku ma ururin doono dukumeenti ama macluumaad ku saabsan xaaladda socdaalka shakhsiga, ilaa ay u baahan tahay sharciga gobolka ama federaalka. Haddii shaqaaluhu si badheedh ah ugu xad-gudbo SB131, waxay mutaysan doonaan amar iyo ganaax ugu badnaan $50,000.
Sharcigan ayaa guul weyn u ah isbaheysigayada ka dhanka ah ilaalinta iyo dadaallada booliska ee ICE! Weli, waxaa haray shaqo badan si loo baabi'iyo qalabka fulinta ICE.
Waa maxay SB21-131:
Waxay ka mamnuucday wakaaladaha gobolka inay la wadaagaan Macluumaadka Aqoonsiga Shakhsi ahaaneed (PII) wakaalada socdaalka federaalka iyo dhinacyada 3aad iyada oo aan la helin waaran maxkamadeed, amar ama amar maxkamadeed
Ka dib Janaayo 1, 2022, waxay u baahan tahay wakaaladaha socdaalka ee federaalka iyo dhinacyada 3aad inay caddeeyaan in macluumaadka laga helay xogta gobolka aan loo isticmaali doonin ujeedooyinka fulinta socdaalka.
Wixii ka dambeeya Janaayo 1-deeda, 2022 ma jiro wakaalad ka tirsan gobolka oo aruurin doonta xogta shaqsiga meesha uu ku dhashay ama xaaladda socdaalka.
Wuxuu u baahan yahay dhammaan codsiyada diiwaannada oo ay ku jiraan PII ee ka yimid wakaalada gobolka in lagu qoro diiwaan qoraal ah.
Shaqaalaha dawladda ee si ula kac ah ugu xad gudba SB131 waxa lagu mutaysan doonaa ganaax iyo ganaax.
Wax ka beddelka Xeerka Diiwaanka Furan ee Colorado si loo hubiyo u hoggaansanaanta SB131.
OLOLAHA MUDNAANTA CIRC EE TIERKA LABAAD
XUQUUQDA SHAQAALAHA BEERAHA
Mid ka mid ah biilasha taariikhiga ah ee la ansixiyay kalfadhigan ayaa ahaa SB21-087, sharciga Xuquuqda Shaqaalaha Beeraha iyo mid ka mid ah mudnaantayada labaad ee isbahaysi ahaan. Waxaan rabnaa inaan kor u qaadno xagga Cadaaladda, Mashruuca Ilaalinta Nidaamka Cuntada, iyo Mashruuca Isbaanishka (HAP) iyo kuwa kale oo badan oo ka shaqeeyay ololahan dadaalkooda hagar la'aanta ah si ay u keenaan ilaalintan muhiimka ah shaqaalaha beeraha ee gobolkayaga!
Sharcigani waxa uu la kulmay dib u dhac xoog leh oo joogto ah oo kaga imanayey u ololaynta beeralayda kaas oo ku dhamaaday doodo habeenimo habeenimo ah oo ka dhacay aqalka aqalka sare iyo aqalka sare. Isbahaysiga xuquuqda shaqaalaha beeralayda waxay la shaqaynayeen kuwa ka soo horjeeda si ay u abuuraan biil ballaarinaya ilaalinta shaqaalaha oo ay sameeyeen wax ka beddel u oggolaanaya in sharcigu meel mariyo. Natiijo ahaan, qaar ka mid ah qaybaha waaweyn ee biilka ayaa lagu xallin doonaa iyada oo loo marayo nidaamka sharci dejinta iyadoo la raacayo Waaxda Shaqada ee Colorado iyo talooyinka bulshada/warshadaha. In kasta oo ilaalinta waaweyn lagu abuuray sharcigan, haddana waxaa jira shaqo ka horraysa si loo hubiyo in hannaanka sharci-dejinta iyo go'aannada saacadaha dheeraadka ah ay yihiin kuwo caddaalad ah oo xuddun u ah baahiyaha shaqaalaha beeralayda.
Waa maxay SB21-087:
Waxay u baahan yihiin beeralayda inay siiyaan shaqaalaha mushaharka ugu yar ee gobolka oo ah $12.32 saacadii, ama mushaharka ugu yar ee maxaliga ah haddii ay ka sarreeyaan, oo aan ahayn kaliya mushaharka federaalka ee $7.25
Waxay u ogolaataa shaqaalaha beeraha inay ku biiraan ururada oo ay si wadajir ah u gorgortamaan
Waxay u baahan tahay mushaharka saacadaha dheeraadka ah ee shaqaalaha beeraha (faahfaahinta waxaa lagu go'aamin doonaa samaynta qaanuunka)
Waxay u baahan tahay nasasho cunto iyo waqtiyo nasasho
Waxay xaddidaysaa isticmaalka qalabka gacanta gaaban, marka laga reebo hawlgallada dabiiciga ah iyo xaalado kale oo gaar ah
Waxay u baahan tahay shaqaaluhu inay galaangal u yeeshaan adeeg bixiyayaasha muhiimka ah, gaar ahaan guryaha loo shaqeeyaha
Waxay u baahan tahay loo-shaqeeyayaasha inay bixiyaan badbaado iyo ilaalin dheeraad ah shaqaalaha inta lagu jiro xaaladaha degdegga ah ee caafimaadka dadweynaha
Wuxuu abuuraa guddiga la-talinta shaqada beeraha oo daraaseeya oo falanqeeya mushaharka beeraha iyo xaaladaha shaqada
Waxay u sahlaysaa shaqaaluhu inay ka warbixiyaan, oofiyaan, oo ay raacaan tillaabo sharci ah oo ka dhan ah loo-shaqeeyayaasha ku xadgudba ilaalintan
SOCDAALKA KALE GUULEYSTO SANADKAN! SANAD WARBIXIN AH EE XUQUUQDA SOO GAARAHA
SB21-009 Sharciga Xuquuqda Taranka ee Haweenka Aan sharciyeysneyn ee COLOR biilka, SB21-009, wuxuu ballaarin doonaa Medicaid si uu u daboolo sanado qiimihiisu yahay sahayda kahortaga afka ee dadka aan sharciga lahayn. Sharcigan waxaa kafaala qaaday Senator Jaquez Lewis iyo Wakiil Caraveo!
HB21-1313 Qareenka Ilaalinta Ilmaha iyo Caruurta Soogalootiga ah oo ay hogaaminayaan Wakiil Benavidez iyo GonzalesGutierrez, HB21-1313 waxay siin doontaa dhexdhexaadiyaha gobolka awood uu ku baadho tas-hiilaadka ay ku jiraan carruurta aan lala socon ee xarumaha daryeelka ilmaha ee gobolka shatiga u haysta ee Colorado marka ay helaan cabasho la xiriirta ladnaanta ubadka.
HB21-1150 Abuuritaanka Xafiiska Maraykanka Cusub oo ay hogaaminayso Guddiga Samatabbixinta Caalamiga ah, HB21-1150 waxay ka abuurtaa Xafiiska New Americans (ONA) gudaha Waaxda Shaqada iyo Shaqaalaynta ee Colorado sida ilaha gobolka ee jaaliyadaha soogalootiga ah ee Colorado. Tani sidoo kale waa halka aan rajaynayno in aan hoyno Sanduuqa Difaaca Sharciga Socdaalka marka xafiiska si rasmi ah loo sameeyo.
HB21-1011 Helitaanka Codbixinta Luuqadaha Badan: Sababta Guud ayaa si guul leh u horseeday HB21-1011 taasoo balaadhisa gelitaanka waraaqaha cod bixinta oo abuuraya ilo badan inta lagu jiro doorashooyinka caddaaladda luqadda, oo ay ku jirto khadka tafsiirnimada ee doorashooyinka.
SB21-077 Ka saar Xaqiijinta Joogitaanka Sharciga ah ee Aqoonsiga SB21-077 waxay balaadhisaa helitaanka dhammaan shatiyada xirfadeed ee bulshada aan sharciga lahayn. Joogitaanka sharciga ah mar dambe loogama baahan doono codsade kasta oo gobol ama shati xirfadeed maxalli ah.
HB21-1060 U-Visa Halbeega: RMAIN iyo ACLU ee Colorado ayaa hogaaminayey HB21-1060, kaas oo dejiya jaangooyooyinka nidaamka shahaadaynta U-Visas oo hubiya in sharci fulinta raacaan tilmaamaha lagama maarmaanka u ah in lagu wargeliyo dhibanayaasha xaqa ay u leeyihiin inay helaan heerka fiisaha .
HB21-1054 Ka Reeban Guriyeynta ee Faa'iidooyinka Dadweynaha HB21-1054 waxaa maamulay Waaxda Arrimaha Gudaha (DOLA). Sharcigu wuxuu meesha ka saarayaa shuruudii hore ee DOLA iyo wakaaladaha kale si ay u waydiiyaan caddaynta shakhsiga ee joogitaanka sharciga ah ka hor intaysan helin wax dheefaha guriyeynta dadweynaha ee gobolka ama deegaanka.
HB21-1057 Baad Ka Qaadista Soogalootiga Ku Galitaanka Falimaha Sharciga ah HB21-1057 waxay ka dhigaysaa sharci darro in qof laga qaado ama loogu hanjabo xaaladdiisa socdaalka inay dembi galaan ama in laga ilaaliyo inay soo sheegaan dembi.
SB21-199 Ka Saar Caqabadaha Fursadaha Dadwaynaha Qaarkood SB21-199, oo ay hogaaminayaan Isbahaysiga Waalidka ee Gobolka Colorado, laalay HB1023, taas oo u sahlaysa awoodaha maxalliga ah inay u furaan manfacyada guud xubnaha bulshada ee aan sharciga lahayn iyada oo loo marayo xeerar maxalli ah.
Daraasada SB21-233 CDLE si loo abuuro Caymiska Shaqala'aanta Isbarbar-dhiga ee Shaqaalaha Bidix ka dambeeya ee ay hogaaminayaan COPA iyo CFI, SB21-233 waxay komishanaysaa daraasad ay samaysay Waaxda Shaqada iyo Shaqaalaynta ee Colorado (CDLE) iyo Xafiiska Cusub ee Maraykanka Cusub (ONA) si loo abuuro Talooyinka loogu talagalay barnaamijka beddelka mushaharka ee kuwa shaqo la'aanta ah iyada oo aysan jirin wax khalad ah oo iyaga u gaar ah laakiin aan u qalmin shaqo la'aanta joogtada ah sababtoo ah xaaladdooda socdaalka.
BILAASH KALE OO LA TAAGEERAY SANADKAN:
HB21-1117 – Maamulka Dawlada Hoose oo Kor u qaada Qaybaha Guryaha La Awoodi Karo Waxay u ogolaataa dawladaha hoose inay u baahan yihiin horumariyayaasha guryaha inay ku daraan guryaha la awoodi karo horumarka cusub (Halkan ka sii akhri).
SB21-173 – Xuquuqda Heshiisyada Kiraynta Deganaanshaha Waxay u samaysaa ilaalin adag kiraystayaasha heshiisyada ijaarka iyadoo siinaysa kiraystayaasha fursado badan oo ay kaga fogaanayaan in guriga laga saaro. Sharciga cusub wuxuu u ogolaanayaa kireystayaasha inay joojiyaan dacwada ka saarista iyagoo dib u bixinaya kiradoodii ka daahday - mar kasta ilaa garsooruhu amro inay baxaan. Sharcigan ayaa sidoo kale dhigaya khidmadaha daahsan ee kireystayaasha oo ah $50 ama 5 boqolkiiba inta lagu leeyahay, waxayna u sahlaysaa kireystayaasha inay ku doodaan maxkamada in aan lagu lahayn kiro sababtoo ah hantidooda ayaa ah mid aan la degi karin.
HB21-1121 - Nidaamyada Kireysiga Degaanka Sharcigani wuxuu u abuurayaa ilaalin dheeraad ah kireystayaasha isagoo: ka xakameynaya mulkiilayaasha guryaha inay kordhiyaan kirada wax ka badan hal mar sanadkii; looga baahan yahay sharci fulinta inay sugaan 10 maalmood halkii ay ka ahayd 48 saacadood ka hor intaanay fulin guri ka saarid; waxayna uga baahan tahay mulkiilayaasha aan lahayn heshiisyo kiro qoraal ah inay bixiyaan ogaysiis 60 maalmood ah ka hor intaanay kordhin kirada ama joojinta kirada.
HB21-1201 – Xarumaha Saxitaanka ee Isgaarsiinta Daah-furnaanta Sharcigani wuxuu yareynayaa faa'iidada laga helayo wicitaanada taleefannada xarumaha sixitaanka ee Colorado iyadoo la xaddidayo qiimaha gobolka oo dhan oo u baahan bixiyeyaasha isgaarsiinta inay u soo warbixiyaan saddexdii biloodba mar Guddiga Adeegyada Dadweynaha.
HB21-1280- Dib-u-habaynta Haynta ee ka hor maxkamadaynta waxay u baahan tahay dhageysiga curaarta in lagu dajiyo 48 saacadood gudahooda ka dib marka xabsiga la yimaado wuxuuna u baahan yahay in 6 saacadood gudahood lagu sii daayo qof soo dhejiyay curaarta.
FASHILMAY – SB21-062 – Qalabka Maareynta Dadweynaha ee Jeelka Sharcigani waxa uu isku dayay in uu yareeyo ku tiirsanaanta maxaabiista ka hor inta aan maxkamad la saarin isaga oo u jihaynaya saraakiishu in ay soo saaraan yeedhmo maxkamadeed halkii lagu xidhi lahaa dembiyo yaryar, dambiyo, iyo qaar ka mid ah dembiyada. Sharcigan ayaa si wax ku ool ah loo dilay ka dib markii ay sharci fulinta ku soo baxeen mucaarad xooggan.
FASHILMAY – SB21-273 – Dib-u-habaynta ka hor tijaabada SB21-273 waxa la sameeyay ka dib markii ay caddaatay in SB21-062 aanu lahayn dariiq hore loo maro. Hadafka sharcigan ayaa sidoo kale ahaa in dadka laga ilaaliyo xabsiga dambiyada heerka hoose ah iyada oo saraakiisha la siinayo tigidhada iyo u yeerida halkii laga qaban lahaa. Sharcigu waxa kale oo uu kordhin lahaa isticmaalka aqoonsiga (no-cost bonds) si loo joojiyo dhaqanka xabsiga lagu hayo dadka aan awoodin inay iska bixiyaan. Dhacdo aan la fileyn, sharciga ayaa ku guuldareystay cod 9-4 ah oo ka tirsan Guddiga Maaliyadda ee Golaha 7-dii Maajo markii Rep. Bird (Westminster) iyo Rep. Gray (Broomfield) ay ku biireen Jamhuuriga si ay ugu codeeyaan sharciga.
HB21-1294 – K-12 Hantidhawrka Waxqabadka Nidaamyada Xisaabtanka Waxbarashada Sharcigani waxa uu abuurayaa daraasad ku saabsan dugsiyada dadweynaha ee Colorado. Daraasadu waxay sidoo kale eegi doontaa sida ardayda dakhligoodu hooseeyo iyo ardayda naafada ah loogu adeegayo. Sharcigu waxa kale oo uu ku dhiiri galinayaa hanti dhawraha in uu dib u eego dugsiyada iyo degmooyinka si loo eego eex dhaqameed iyo wixii takoorid ah ee ardaydu kala kulmi karaan qaab dhismeed ama si kaleba.
SB21-057 – Amaahiyayaasha Gaarka ah ee Amaahda Ardayga Shuruucda iyo Dhaqamada Sharcigani waxa uu siinaya ilaalin kordhaysa amaahda ardayda gaarka ah iyada oo lala xisaabtamayo jilayaasha ugaadhsiga ah. Arrinkani waxa uu sii kordhayey muuqaal ahaan sannadkii la soo dhaafay, gaar ahaan sida deymaha gaarka ah aysan awoodin in ay helaan wax gargaar ah sannadkii la soo dhaafay-in kasta oo shirkadaha amaahda gaarka ah ay heleen gargaar badan.
SB21-172 – Sanduuqa Kor u qaadida Mushahar bixinta Barayaasha sharcigani waxa uu abuuraa Sanduuqa Kor u qaadida Mushahar-bixinta Barayaasha ee u heellan in kor loo qaado mushaharka macalinka ee gobolka oo dhan. Isbeddelka macallinku waa arrin aad u weyn oo loogu talagalay bulshooyinka dakhligoodu yar yahay iyo mushaharka macallimiintu waxay noqon kartaa hab lagu caawiyo sii haysashada macalimiin xooggan oo laga yaabo inay ka tagaan xirfadda ama u gudbaan degmooyinka mushaharka sare leh.
HB21-1311 - Cashuurta Dakhliga & HB21-1312 - Caymiska Lacagta Caymiska ee Hantida Iibka Caymiska Lacag-dhaafka ah Biilashan waxa loo wada maamulay si loo xidho daldaloolada cashuuraha oo loo isticmaalo dakhliga cusub si loo labanlaabo Caymiska Dakhliga Dakhliga ee Colorado (EITC) - kaas oo hadda ay heli karaan faylalka ITIN - iyo inaan si buuxda u maalgalino cashuurta canugga gobolkayaga.
SB21-148 – Abuuridda Xafiiska Awood-siinta Maaliyadeed Sharcigani waxa uu abuuraa xafiiska awood-siinta maaliyadeed si uu u kobciyo adkeysiga maaliyadeed iyo fayoobida Coloradans iyada oo loo marayo yoolalka, barnaamijyada, iyo xeeladaha bulshada ka soo jeeda ee lagu dhisayo hantida iyo xasilloonida maaliyadeed.
HB21-1232-Qorshaha Faa'iidada Caafimaadka ee la Habeeyay ee Doorashada Colorado, sharcigani waxa uu abuuraa qorshe daryeel caafimaad oo heersare ah - Xulashada Colorado - kaas oo yeelan doona khidmooyin hoose oo loo heli karo Coloradans aan sharciyeysnayn. Sharcigani waxa kale oo uu uga baahan yahay shirkadaha caymisku inay hoos u dhigaan kharashaadka macaamiisha 15% marka la gaadho 2025.
SB21-027 – Agabka Degdegga ah ee Dhallaanka iyo Qoysaska Colorado Sharcigani waxa uu abuurayaa barnaamij lagu qaybiyo xafaayadda bilaashka ah qoysaska gobolka oo dhan. Qof kasta oo haysta ilmo u baahan xafaayad gudaha Colorado wuu u qalmaa, iyada oo aan loo eegin heerka socdaalka.
HB21-1189 – Nidaami Sumowga Hawada Sharcigani waa tallaabo muhiim u ah hufnaanta shirkadaha sii daaya sunta hawada waana muhiim si ay nooga caawiso inaan la xisaabtano marka bulshadeena caafimaadka iyo hawadu ay khatar ku jiraan. Sharcigu wuxuu u baahan yahay in si dhab ah loo daba galo, oo si guud loo shaaciyo raadraaca wasakhowga khatarta ah.
HB21-1269 - Komiishanka Utilities Public Study of Community Choice Tamarta Sharcigani wuxuu abuurayaa daraasad ku saabsan "doorashada tamarta bulshada" (CCE), taas oo ay bulshadu dooran karto inay ka iibsadaan koronto-qeybiye jumlad ah oo aan ahayn maalgashadayaasha maxalliga ah oo leh utility koronto. Sharcigan ayaa laga yaabaa inuu caawiyo qaar badan oo ka mid ah Colorado ma haystaan ​​doorashooyin marka ay timaado halka ay awooddoodu ka timaaddo.
FASHILMAY – SB21-200 – Yaraynta Gaasaska Guryaha cagaaran waxay kordhiyaan Cadaalada Deegaanka Sharcigani waxa uu xaqiijin lahaa yoolalka lagu dejiyay Roadmap-ka Guddoomiyaha Gobolka Polis si wax looga qabto isbeddelka cimilada waa la fulin doonaa iyada oo la dejinayo xeerar adag oo la dhaqangelin karo si loo xaddido wasakheynta korontada, saliidda iyo gaasta, gaadiidka. , iyo dhisidda waaxaha iyo abuurista agabka lagu hawlgelinayo laguna xoojinayo bulshooyinka ay saamaysay saami-qaybsiga. SB21-200 ayaa dhintay ka dib markii gudoomiyaha Polis uu ku hanjabay inuu diidi doono sharciga.
Biilasha-soo-galootiga-diidka waanu ka soo horjeednay:
FASHILMAY - HB21-1086 - Caddaynta Cod-bixiyaha Shuruudaha Muwaadinimada HB21-1086 waxay ahayd sharci ka soo horjeeda soogalootiga si loo dhiso wax ka beddelka 76 - oo weeraraya gelitaanka codbixinta ee Colorado iyadoo looga baahan yahay dhammaan cod-bixiyayaasha inay bixiyaan caddayn dheeraad ah oo muwaadinimo ah si ay ugu helaan boostada warqadda codbixinta. Waxaanu ka markhaati kacnay xeerkan Golaha Wakiilada, Madaniga, Militariga, iyo Arrimaha Ciidanka, halkaas oo uu ku dhintay 9-2 cod.
CIRC Warbixinta Sharci-dejinta 2021